Taageerida Ganacsiyadeena Dutchtown • DutchtownSTL.org
Taageerida Ganacsiyadeena Dutchtown
DutchtownSTL, Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown, Iyo Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown ku faraxsan tahay inaad qayb ka tahay beesheena! Baro ururadayada oo hubi qaar ka mid ah qaababka aan u wada shaqeyn karno si aan ugu soo bandhigno dhaqdhaqaaq firfircoon Dutchtown iyo meheraddaada.
Ku Biir Kooxdayada Facebook!
Shabakada Ganacsi ee Dutchtown waa koox milkiilayaasha meheraddu ku wada sheekaysan karaan, kula wadaagi karaan ilaha, caawinaadna uga heli karaan ururada Dutchtown. Ku biir maanta!
Annagu ma nihin magaalada, dawladda, ama xitaa ganacsi weyn. Waxaan nahay deriskaaga iyo milkiileyaasha ganacsiga ee iskaa wax u qabso ugu shaqeeya waqtigeenna xaafadda.
Gaar ahaan, Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waa kuwo aan macaash doon ahayn oo ujeeddadiisu tahay soo jiidashada lahaanshaha kala duwan, kor u qaadista meelaha, meelaha, iyo wejiyada, iyo kordhinta deggenaanta xaafadda Dutchtown. Degmada Hagaajinta Bulshada ee Dutchtown waa degmo cashuureed oo gaar ah oo isticmaasha koror yar oo canshuurta hantida ah si ay uga shaqeyso sidii xaafaddu u noqon lahayd mid nabdoon, nadiif ah, oo cagaar ah. Waxaan ku iibineynaa xaafadda hal astaan ​​- DutchtownSTL.
Ayaa Maalgeliya Dadaalkeenna?
Dadaalladeenna waxaa lagu maalgeliyaa isku darka lacagta laga soo ururiyey canshuuraha laga soo ururiyey Degmada Horumarinta Bulshada iyo sidoo kale wax alla wixii tabarucaad shaqsiyeed ah, deeqo ah, iyo maalgelin iskaashi ah oo aan heli karno Haddii aad jeceshahay inaad naga caawiso taageerida shaqadeena, waad awoodaa ugu deeqdo Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown.
Ururada Dutchtown ayaa isu imanaya si ay gacan uga geystaan ​​bixinta ilaha iyo macluumaadka deriskeena iyo ganacsiyada maxalliga ah.
Ganacsiyadeena Dutchtown ee cusub iyo kuwa la aasaasayba, waanu dhiseynaa liisaska Magaalada, Gobolka, iyo ilaha Federaalka si aan kaaga caawino howlaha bilowga ganacsiga iyo joogista joogtada ah ee rukhsadaha, rukhsadaha, iyo canshuuraha Waxaan sidoo kale ku guda jirnaa abuuritaanka hagitaanno socodsiin ah oo kaa caawinaya inaad kobciso ganacsigaaga. tilmaamaha ku saabsan helitaanka Google My Business [qayb ka mid ah iyo qaybta labaad] tusaalooyinka waxa aan ka shaqeyneyno). Intaa waxaa sii dheer, waxaan kaa caawin karnaa kor u qaadida meheraddaada iyada oo aan qiimo lagaa siinaynin — aan ka caawinno in aan ku fidinno warka ku saabsan waxa aad halkan ka qabanayso ee bulshada dhexdeeda ah! Kaliya nala soo xiriir.
Waxaan sidoo kale si joogto ah ugu dhajinaa on Blog DutchtownSTL marka fursadaha gargaarku u yimaadaan ganacsiyadayada. Intii lagu guda jiray cudurka faafa ee COVID-19 waxaan daabacnay qoraal si aan kuu caawino ka codso Deeqaha Ganacsi Yaryar Magaalada St., oo waxaan la wadaagnay macluumaad ku saabsan codsashada amaahda Musiibada ee Maamulka Ganacsiga Yaryar iyo maaraynta xeerarka ku xusan Xeerka Jawaabta Coronavirus. Waxaad ka heli kartaa warar dheeri ah iyo wixii ku soo kordha Bogga Facebookt ee DutchtownSTL, Barta Twitter-ka @xDayaannax, ama kuwayaga Milkiilayaasha Ganacsatada Dutchtown kooxda Facebook.
Qofkasta oo jooga Dutchtown
DutchtownSTL waxay sameysay liisas farabadan oo ah khayraadka xaafadda, oo ay kujiraan xiriirada saraakiisha maxalliga ah, yutiilitida, iyo adeegyada aan degdegga ahayn. Waxaan sidoo kale u abuurnay hagayaal gudbinta warbixinnada Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta, la shaqaynta Khabiirkaaga Horumarinta Xaafadaha, Iyo u sheegista dhibaatooyinka booliska St..
Sideen U Shaqeynaa?
Iyada oo qayb ka ah Hindisaha UrbanMain, Ururada Dutchtown waxay ka hoos shaqeeyaan Wadada Weyn 4 + 1 Point Approach. Shan deris uu hogaaminayo gudiyo la kulan bishiiba mar oo aad u soo sheegtid guddiyada Degmada hagaajinta magaalada Downtown iyo Dutchtown. Waxaan dhawaan shaqaaleynay waqti dhiman Maamulaha Kobaca Dutchtown si gacan looga geysto isu-duwidda howlahaas, laakiin inta badan shaqadeennu waxay ahayd tabaruce.
La kulan Guddiyadayada Dutchtown
Waad ka akhrisan kartaa dhammaan wixii ku saabsan shanteenna guddi oo waad iska diiwaan gelin kartaa si aad uga mid noqoto dutchtownstl.org/committees, ama sii wad akhriska guudmar waxa aan sameyno.
Guddiga Naqshadeynta ayaa ka shaqeynaya hagaajinta waxyaabaha jirka ee xaafadda. Waxaan hiigsaneynaa inaan hagaajino muuqaalka iyo waxqabadka xaafada isla markaana ka faa iideysano jawiga cufan iyo taariikheed ee la dhisay ee Dutchtown. Wixii ku saabsan hagaajinta dukaanka ama kor u qaadista jirka ee kale, la xiriir design@dutchtownstl.org.
Guddiga Muhiimka ah ee Dhaqaalaha wuxuu doonayaa inuu soo jiito maalgashi isla markaana uu dhiirrigeliyo ganacsiga iyo waxqabadka dhaqaalaha. Waxaan taageero siineynaa ganacsiyada cusub iyo kuwa cusub ee xaafada. Xiriir ev@dutchtownstl.org fursadaha maalgashi.
Guddiga Dallacaaddu waa qaybta suuqgeynta ee Dutchtown. Waxaan maamulnaa degelkan iyo kanaallada Dutchtown ee warbaahinta bulshada, waxaana dooneynaa inaan ku faafinno ganacsigaaga. Wixii fikrado suuqgeyn ah, dhacdooyin, ama dallacsiin ganacsi, la xiriir promotion@dutchtownstl.org.
Guddiga Abaabulku wuxuu ka dhisaa xaafadda Dutchtown iyada oo loo sii marayo wada-hawlgalayaasha hore iyo kuwa cusub. Waxaan dooneynaa inaan isku xirno ilaha maalgelinta, ururada bulshada, iyo tabaruceyaasha si shaqada looga qabto Dutchtown. Si looga caawiyo horumarinta ilaha shaqadeena, la xiriir ururka@dutchtownstl.org.
Guddi Nadiif ah oo Cagaaran
Gudiga Badqabka iyo Cagaaran ee Badbaadada iyo Cagaaran wuxuu soosaaraa oo hirgaliyaa istiraatiijiyado qurxinta, dayactirka, amniga, adeegyada cadaalada bulshada, iyo dadaallada cagaaran. Waxaan ka shaqeyneynaa hagaajinta aragtida iyo xaqiiqda Dutchtown labadaba si aan u soo jiidanno ganacsiyada, dadka deegaanka, iyo booqdayaasha. Xiriir scg@dutchtownstl.org inaad dhex gasho.
Sideen U Wada Shaqeyn Karnaa?
Ururadeenu waxay guuleysanayaan oo keliya markaan yeelano ganacsiyadayada iyo xaafadaha aan deggen nahay ee Dutchtown. Haysashada Dutchtown mid cajaa'ib leh, noocyo badan, oo firfircoon waxay u baahan tahay shaqo adag dhammaanteen.
Ku biir guddi, nala soo xiriir la fikradaha, su'aalaha, ama walaac, ama kaliya riix halkan on Dutchtownstl.org si aad sifiican noogu bartaan oo aan waxbadan uga ogaano dhamaan waxyaabaha waaweyn ee ka dhacaya Dutchtown. Waxaan halkaan u nimid inaan ka caawino dhisida xaafad horumarsan oo Dutchtown ah qof walba!
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay September 21st, 2021 .
DutchtownSTL.org Taageerida Ganacsiyadeena Dutchtown